Taliska Booliska Oo Beeniyay In Masuuliyiin Ciidanka Ka Tirsan Xisbiga KULMIYE Xilal U Magacaabay | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Taliska Booliska Oo Beeniyay In Masuuliyiin Ciidanka Ka Tirsan Xisbiga KULMIYE Xilal U Magacaabay
Hargeysa(SDWO.com): Taliska ciidamadda booliska Somaliland ayaa beeniyay warar ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta gudaha oo sheegayay in masuuliyiin ka tirsan ciidamadda booliska xilal looga magacaabay xisbiyadda siyaasadda gaar ahaana xisbiga KULMIYE.
Af-hayeenka ciidanka booliska Somaliland gaashaanle sare Faysal Xiis, oo maanta warbaahinta kula hadlay magaaladda Hargaysa ayaa waxba kama jiraan iyo mid aan sal lahayn ku tilmaamay warkaasi, isagoo xusay in aanay saxaafadda u haboonayn in ay ku deg degaan arrimaah ciidamadda.
“Ma Jiraan masuuliyiin ka mid ah ciidanka Booliska oo uuxilal u magacaabay xisbiga Kulmiye. Warkaa aanu ku aragnay warbaahinta qaarkood wax ka jiraa ma jiraan. waana war aan sal iyo raad toona lahayn”ayuu yidhi Faysal Xiis.
Isagoo hadalkiisa sii watay-na waxa uu yidhi “Anagu waxaanu nahay booliska mana aha in aanu galno siyaasad, waxaanu ka madax banaanahay arrimaha siyaasada, sidoo kale waxaanu dhex u nahay bulshada iyo siyaasiyiinta-ba. Waxaan mar labaad ku celinayaa arrinkaasi in aanay waxba ka jirin”.